Kismaayo News » FIIDSOOH : Ahlu Sunnah iyo Kaambooni, Qeerkiisa loo xiiryoow soo qoyso
FIIDSOOH : Ahlu Sunnah iyo Kaambooni, Qeerkiisa loo xiiryoow soo qoyso
Kn: Ciidamada xarakada Ahlu Sunnah Wal jamaaca ayaa la sheegey in ay ku biireen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Arrinkani waxaa saxaafadda u sheegey gudoomiyaha fulinta Ahlu Sunnah Waljamaaca Sheekh Maxamed Xeefoow ee gobolada dhexe, isagoo sheegey in ay go’aansadeen in ay ku biiraan ciidamada dowladda iyo maamul ahaanba.
Waxaa xiiso leh in arrintani aysan la qabin Ahlu Sunada Koonfureed, gaar ahaan gobolka Gedo.
Waxaa kale oo xusid mudan in ku biirista Ahlu Sunnah ee dowladda ay ka dhigantahay in ay ka laabteen qorshihii la hadal heyn jirey ee ahaa in ay maamul goboleed dhisayaan.
Maamul goboleedka waa qodobka ugu muhiimsan ee looga gol leeyahay ku dhawaaqista in Ahlu Sunnah ay ku biirtey dowladda.
Tani waa talaabo istaraatiiji ah oo lagu miji xaabin karo qorshaha maamul u samaynta Jubbooyinka iyo Gedo.
Marka ay hergasho in ciidamada Ahlu Sunnah ay qaataan dareeska dowladda, kuna biiraan, waxaa xigta in dowladda soo saarto go’aan ah “dalka kama jiri karaan ciidamo aanan ahayn kuwa dowladda”, taasoo loola jeedo xoogaga Raaskaanbooni iyo Ahlusunada Gedo ee saameynta ugu badan ku leh goboladda sii koonfureed, ee hurmuudka ka ah Jubbaland.
Run ahaantii horey dowladda waa u sheegtey warkaasi, waxaana hadalkaasi laga soo xigtey markii taliyaha ciidamada xoogga dalka uu booqdey Kismaayo isaga oo yiri “Ciidamo aanan kuwa dowladda ahayn ma jiri karaan”. Walow dadka dhinaca wanaagga wax ka eegga ay hadalka u fasirteen hadal hordhac u ah mustaqbalka marka dalka ay ka hirgalaan maamullada hoostagaya dawladda dhexe.
Inkasta oo laga shakin karo waqtiga ay arrintani kusoo beegantay, hadana waxaa jira sababweyn oo loo saarin karo in talaabadani ay u qaaday Ahlu Sunnah, ogana tanaasushey maamul goboleedkii, taana waa in aysan gacanta ku heeynin labbo gobol iyo wixii ka badan oo uu dastuurku qabo in maamul ay noqon karaan, in Alshabaab ay u wareegeen dhanka gobolada dhexe ayna garwaaqsadeen dagaalo faraha looga gubto oo ku soo waajahan iyo in ay sii shiiqayso kaalmadii ay ka helijireen Itoobiya, sidaasi darteedna xarakada ma aysan lahayn dooq kale oo u furan oo aan ahayn in ay dowladda ku biirto.
Arrin tan ifafaalo hordhac ah u ah waxa ay ahayd in maanta war saxaafadeed kasoo baxay golaha wasiiradda oo looga hadlayay miisaaniyadda dalka ee sanadda 2013-ka lagu soo daray in ciidamada dowladda ee Kismaayo joogo ay fashiliyeen weerar isqarxin ahaa, taasoo lagu amaanay.
Waxay tani muujineysaa xiisaha iyo ka warqabka badan ee dowladdu u heeyso ciidamada dowladda ee Kismaayo ku sugan, illaa heer war saxaafadeed aanan amaanka quseeynin lagu soo darro warkooda.
Laakiin Kaambooni kaligood kuma ahan arrintani, Ahlu Sunada Gedo oo iyaga qeyb weyn ku yeelanaya maamul u samaynta Jubbooyinka ayaa iyaguna uu saameynayaa go’aan kasta oo dowladdu ka qaadanayso Jubbooyinka.
Inkasta oo dhamaan gudiyaddii farsamada ay Kismaayo ku wada suganyihiin iyo madaxdii kooxaha siyaasadda, ayaysan hadane wali jirin wax dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo loo qaaday dhanka maamul samaynta, tani waxa ay keentey shaki weyn oo ah halka ay isla marayaan Igad iyo dowladda, iyo ineey jiraan heshiisyo qarsoodi ah.
Kaambooni waxay waajahaysaa “qeerkiisa loo xiiryoow, adiguna soo qooyso”. FIIDSOOH